Mmetụta nke 5 ụzọ rụkwaa taya-News Center-NINGBO SUNSOUL AUTO ACCESSORIES CO., LTD
Mmetụta nke 5 ụzọ idozi taya
Oge: 2020-08-27 Hits: 27
Ọnọdụ nke nrụzi taya na-ezute ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla nwe ya. Ọ dị ọnụ ala karịa ịrụzi taya, ọ nwere ike ịga n'ihu na-eji ya emezie obere ọnya taya.Ha ọ bụ, n'agbanyeghị ọtụtụ ụzọ nrụzi taya na ahịa, dịka mmezi oyi, mmezi ọkụ, akara taya, ero. mbọ, na mmiri mmiri na-arụzi taya, ọtụtụ ndị na-azụ ahịa na-anya ụra. Kedu ụzọ dị mma? N'ezie, usoro ọ bụla nwere uru na ọghọm ya, anyị nwere ike ịhọrọ dịka mkpa ha si dị.
1. Rubber warara: mfe ọrụ maka mberede
Zọ kachasị esi arụzi taya bụ ịtinye eriri roba n'ime akụkụ nke taya ahụ. Nnukwu uru nke usoro a bụ na ọ na-adị ngwa ma dịkwa mma, ọ na-ewe naanị minit ole na ole, ọ dịghịkwa mkpa iwepụ taya site na mgbanaka ígwè. Ihe ọghọm bụ na ọ naghị adịte aka ma ọ na-esiri ike ịnagide nnukwu ọnyá. Emekarị ọ nwere ike na-eji dị ka a nwa oge usọbọ. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịga n'ihu na-eji taya ahụ, ị ​​ga-arụkwa nrụkwa n'ime.
2. Oyi mmezi: adaba ma inogide
N'oge mmezi oyi, ịkwesịrị iwepu taya site na rim ahụ, chọta nkwụsị ma hichaa ihe ndị si mba ọzọ gburugburu ezumike ahụ, wee kpoo ihe nkiri pụrụ iche na-arụzi taya site n'ime ime taya ahụ iji mezue mmezi ahụ. Usoro a yiri usoro ndozi igwe kwụ otu ebe, belụsọ na ọ chọrọ igwe mkpụ igwe pụrụ iche na ihe nkiri mmezi taya. Ọ bụ ezie na usoro a nwere ike ịrụzi nnukwu ebe mebiri emebi na taya ahụ, ọ naghị adịte aka. Mgbe oge idei mmiri ma ọ bụ ịnya ụgbọ elu dị elu, nsị ikuku nwere ike ime na ebe edozi.
3. Ihe mgbakwunye na-ekpo ọkụ: Ọ dịkwa mma, mana ịchọrọ ịchọta azụmahịa a pụrụ ịdabere na ya
Usoro mmezi ọkụ dị ka usoro ndozi oyi, nke a na-etinye ihe nkiri pụrụ iche na nkwụsịtụ, mana a chọrọ usoro ọzọ iji jiri igwe eji eme achịcha mee mkpọtụ ahụ ruo mgbe agbaze ihe nkiri ahụ wee gbasasịa ya. Ya mere, uru nke nrụzi na-ekpo ọkụ bụ na ebe a rụzigharịrị na-adịgide adịgide, ọ gaghị ewepụ ikuku ugboro ugboro. Agbanyeghị, nrụzi ọkụ na-ezighi ezi nwekwara ike imetụta nwa ebu n'afọ. Ndozi ọkụ na-achọsi ike na ọnọdụ okpomọkụ na oge nke kpo oku, ọkachasị taya nke ụgbọ ala ndị ọzọ dị obere karịa nnukwu gwongworo. Ezighi ezi kpo oku na elu okpomọkụ nwere ike imebi taya.
4. Egwu mbọ: na-arụ ọrụ nke ọma mana ọnụahịa dị elu
Usoro ịmezi ero ahụ, dị ka aha ya na-egosi, na-eji ihe nkedo roba yiri nke ero iji chọpụta oghere ndị dị na taya ahụ, gbanye mgbọrọgwụ ero ahụ, wee belata oke ahụ. Ejiri gluu pụrụ iche glued akụkụ ahụ. Mgbọrọgwụ nke ero nwere ike igwu mpụga mmeju mmetụta, na esịtidem akụkụ nke ero bụ Ẹkot na esịtidem emeju mmetụta. Dabere na akụkọ, mmetụta nke mgbakwunye ero ero ka mma, mana ọ na-ewe ogologo oge na usoro mmezi ahụ, nke na-ewekarị ọkara awa. Ọnụ ego ya dịkwa elu karịa nrụzi taya nkịtị.
5. Mmiri akpaka akpaaka: naanị mberede
Ka ọ dị ugbu a, ọtụtụ ụgbọ ala nwere taya taya ndị ọzọ, Ma enwere ụdị ole na ole na-ejedebe na ohere ma jiri mmiri na-emezi taya iji dochie mgbakọ taya. Igwe mmiri a na-arụzi taya bụ ihe mejupụtara polymer n'ụdị mmiri ọcha ụfụfụ. A na-echekwa ya n'ime ebe ikuku ikuku jikọtara. Mgbe eji ya eme ihe, a na-agbanye ya n'ime taya site na ọnụ valvụ. N'otu oge ahụ, a na-eji nrụgide nke ikuku ikuku na-agbanye mmiri mmiri n'ime taya ahụ mgbe ọ na-agbanye taya ahụ. Mgbe ahụ, a na-ekpuchi mmiri na-arụzi taya ahụ n'akụkụ akụkụ nke taya ahụ site na ịkwọ ụgbọala, na a na-emepụta ihe nkiri akara n'ime ime taya ahụ ka ọ rụọ ọrụ mmezi nke taya. Usoro a bụ usoro mmezi ngwa ngwa mberede mgbe enweghị ike ịchọta mmebi doro anya. Otú ọ dị, mmetụta nke nrụzi taya adịghị oke, oge nkwụsi ike na-adịkwa ntakịrị. Ya mere, mmiri na-arụzi taya ahụ bụ naanị ngwaahịa mberede. Enweghị taya mapụtara, enweghị ụlọ nrụzi, ị ga-anọgide na-eji ya.
Nwere ike ịgbaji taya niile? O doro anya na ọ bụghị. Ma ọ nwere ike idozi ya dabere na ebe taya ahụ merụrụ ahụ na oke njọ nke mmerụ ahụ ahụ. a nnukwu loophole, ị kwesịrị ị na-anọchi taya ozugbo. Ebe ọ bụ na taya ndị nwere ụdị mmerụ ahụ ahụ esiteghị na ọ na-esiri ike nrụzi, nsonaazụ mgbe emezigharị enweghị ike imesi obi ike. Idozi taya abụghị panacea, ọkachasị ndị nwe ụzọ nrụzigharị taya mberede nke na-eji mmiri agbazi igwe arụ ọrụ na ụzọ egbe. Akwadoro ka ịchọta ebe nrụzi kacha nso maka ịrụzi ma ọ bụ gbanwee taya ozugbo enwere ike.
Kedu ihe ị na-achọpụta mgbe taya taya ahụ kwụsịrị? Rụzigharịa taya ahụ, gbaa mbọ hụ na ị na-elezi taya ahụ anya, n’ihi na ịrụzi taya ahụ ga-emebi ngwangwa nke taya ahụ, ma ọ bụrụ na elezighị ya anya, ọ ga-eme ka ụgbọala ahụ maa jijiji ma na-ere mmanụ ọkụ nke ukwuu. Ndị ọkachamara na-arụzi mmezi na-ekwu na ọ bụrụhaala na ha gafee ule na-agbanwe agbanwe, ha nwere ike idowe ya na wiil azụ na azụ. N'otu oge ahụ, nna ukwu na-ahụ maka ndozi tụkwara aro na onye nwe ya nwere ike ịnwe obere mgbapụta ikuku eletrik na ụgbọ ala ahụ iji kpoo taya na mberede. Otu obere ikuku mgbapụta eletrik bụ ihe dị ka $ 10 ruo $ 30. Mgbe onu oriri, ụgbọ ahụ nwere ike na-agba ọsọ Ọ bụla nsogbu na ọkara elekere, n'ihi ya ị nwere ike ịchọta ụlọ ọrụ nrụzi dị nso ma ọ bụ ebe nrụzi taya.
Previous: Ekele dịrị gị na ezinụlọ gị
Ọzọ: Automechanica Ngosi na Shanghai